သင်၏မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်ကိုအခြားအကောင့်တစ်ခုသို့ပြောင်းနိုင်ပါသလား။ - Microsoft
အဓိက > Microsoft > မိုက်ခရိုဆော့အကောင့်များကိုပေါင်းခြင်း - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်များ
မိုက်ခရိုဆော့အကောင့်များကိုပေါင်းခြင်း - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်များ
ဟုတ်တယ်၊ကရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာသွားရန်လမ်းမရှိချေလွှဲပြောင်းမှ Office မှာစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအခြား Microsoft အကောင့်။ .. ထို subscription ကိုကွယ်လွန်သောအခါဖန်တီးပါကsubscription အသစ်ကိုရယူပါ။ ထို့နောက် Office application တွင် File - ကိုနှိပ်ပါ -အကောင့်နှင့်မှာကညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှထွက်၏အဟောင်းအကောင့်နှင့်ကအသစ်အကောင့်။ဖေဖော်ဝါရီ ၄ 2019
HELLO WINDOWS UNIVERSE၊ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Windows ကိုအသုံးပြုသူ ၁၀ ခုရဲ့ Windows WINDOWS 10 PC ကိုဘယ်လိုပြောင်းနိူင်မလဲဆိုတာကိုငါတို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းစဉ်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်အတွက်၊ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည့်ပထမဆုံးနည်းလမ်းမှာမိုက်ကရိုအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ SYSTEM အသစ်ကိုသင်၏မိုက်ကရိုအကောင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ပါ။
အသုံးပြုသူချိန်ညှိမှုများ၊ နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်မျက်နှာပြင်များ၊ စားပွဲစသည်တို့ကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုဤအရာလွှဲပြောင်းပေးသည်ယခုသင်ယခုဒေသဆိုင်ရာအကောင့်ဖြင့်ဤအရာကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအရာကိုသင်လုပ်ရန်၎င်းသည်မိုက်ကရိုအကောင့်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရမည်။
ဒီနည်းကို SETTINGS သို့လုပ်ရန်, အသုံးပြုသူများ။ ထိုအခါသင့် INFO ။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
မိုက်ကရိုအကောင့်တစ်ခုဖြင့် ၀ င်ပါ။ SETUP ပြီးမြောက်ရန်အွန်လိုင်းတောင်းဆိုမှုများကိုလိုက်နာပါ။ သင်သည်သင်၏အသစ်သောစနစ်သို့ ၀ င်သောအခါ၊ ဤမိုက်ခရိုစကောစာရင်းနှင့်သင်၏ချိန်ညှိမှုများသည် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
ဒီနည်းကိုသင်၏ဟောင်းနွမ်းသောစနစ်မှအသစ်သို့အသစ်သို့ဖိုင်များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များယူဆောင်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ONREDRIVE တွင်ရှိသော Element များသို့သင်သာ Access ရှိသည်။ သင်၏ file တစ်ခုလုံးကိုသင်၏ Old System သို့သင်၏ file များအားရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီးစနစ်အသစ်သို့ရွေ့လျားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် LIT.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေရန်ပြင်ပ Hard Hard Drive ကိုအသုံးပြုရန် ပို၍ မြန်သည်။ သင်၏ Old System သို့သွားပါ၊ ချိန်ညှိချက်များ၊ update နှင့်လုံခြုံမှုသို့သွားပါ၊ ထို့နောက် back up လုပ်ပြီး drive ကိုထည့်ပါ။ သင်၏ Hard Hard Drive ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက်သင်၏ Desktop, စာရွက်စာတမ်းများ, DOWNLOADS, တေးဂီတ, ပုံများအရန်ကူး BINDOWS ။ နှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ဖိုင်တွဲများထပ်မံကူးယူလိုပါက၊ ပိုမိုသောရွေးချယ်မှုများကို ရွေးချယ်၍ ဖိုလ်ဒါများကိုရွေးချယ်ပါ။
backup အပြည့်အဝရှိသည့်အခါစနစ်အသစ်သို့ Hard Drive ကိုရွှေ့ပါ၊ ချိန်ညှိချက်များ၊ မွမ်းမံမှုများနှင့်လုံခြုံမှုသို့သွားပါ၊ နောက်သို့ပြန်သွားပါ၊ နောက် drive တစ်ခုအောက်တွင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများထပ်ထည့်ပါ။ အိုင်တီကိုနှိပ်ပြီးယခင်အရန်ကူးတစ်ခုမှဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်နှိပ်ပါ။ သင်ပြန်လည်ရယူလိုသည့်ဖိုင်များကို ရွေးချယ်၍ ပြန်ယူကိုနှိပ်ပါ။
တတိယအပိုင်းအစီအစဉ်များကိုသင်လက်ဖြင့်မလုပ်လိုလျှင်သင်အတွက်သုံးနိုင်သည်သင်လွှဲပြောင်းမှုပုံစံကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များရှိသည်။ သငျသညျအစအိုဟောင်း drive ကိုလိုအပ်အဟောင်းအိုဟောင်းခြင်းနှင့်စနစ်သစ်ကိုနှစ် ဦး စလုံးအပေါ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်, သို့သော်ခက်ခဲသောအလုပ်အများစုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် DON ။ အကယ်၍ သင်ဟာအိုဟောင်းစနစ်တစ်ခုတွင်တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒုတိယစက္ကန့်အစစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
APP ကိုဖွင့်ပါ။ ငါသည်အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ ဒေတာကိုလွှဲပြောင်းလိုပါကနောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်လွှဲပြောင်းလိုသောအသုံးပြုသူအကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါသင်တင်ပို့ချင်သော Hard Drive ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်စကားဝှက်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည်ဆိုလျှင်၊ အကယ်၍ စကားဝှက်ကိုမဟုတ်ပါကထည့်သွင်းရမည်၊ ဤအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင် Hard Drive ကိုကွန်ပြူတာကနေဖြုတ်ပြီး System အသစ်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ စနစ်အသစ်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။
အွန်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုကိုလိုက်နာပါ။ လွှဲပြောင်းမှုသည်တစ်စုံတစ်ရာကြာသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် PCMOVER နှင့် PCTRANSFER ဟုခေါ်သည့်အခြားသုံးပုံတစ်ပုံကိရိယာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုကြသည်။
ပြUBနာများပိုမိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သင့်ဝင်းဒိုးအတွေ့အကြုံများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows WINDOWS CLUB DOT COM ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလာလည်ပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မမေ့မလြော့ပါ၊ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စကြဝIVာကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်အကြောင်းအရာသစ်ကိုထည့်သွင်းနေပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်စီးပွားရေးအကောင့်များကို Microsoft တွင်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်မည်နည်း။
မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပိုင် Microsoft အကောင့်များနှင့်Microsoft365 အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းအကောင့်များမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါင်းစည်းခဲ့သည်ဒါပေမယ့်သူတို့ကဘေးချင်းယှဉ်သုံးနိုင်တယ်။
အီးမေးလ်တစ်ခုအားပေါင်းစည်းရန် Microsoft Word, Excel နှင့် Outlook ကိုသုံးပါ။
မဇ္ဈိမအိုင်တီသင်တန်းမှ Kyle အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာအီးမေးလ်ပုံစံတစ်ခုကို Microsoft နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစည်းရမလဲဆိုတာပြချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော့်မှာ Outlook, Excel နဲ့ Microsoft Word ပွင့်နေတယ်။ ဤအီးမေးလ်ကိုဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်သုံးမည့်ပရိုဂရမ်သုံးခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာ Microsoft Word မှာငါပို့ချင်တဲ့အီးမေးလ်ရှိတယ်။ ဒီမှာ Microsoft Excel မှာငါအီးမေးထဲမှာနာမည်တွေ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေနဲ့ငါထည့်ချင်တဲ့အခြားအချက်အလက်တွေရှိတယ်၊ အကြောင်းမှာရေးပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်စာပို့ခြင်း tab ကိုနှိပ်ပါ။ Launch MailMerge ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် Select Recipients ခလုပ်ကိုသွားပါ။ နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများပါရှိသော workbook ကိုရှာပါ။
သတ္တုတွင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်၌ရှိပြီး Sheet ၁ ဖြစ်သည်။ ယခုငါ Excel worksheet နှင့် Microsoft Word စာရွက်စာတမ်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးပါက၊ Mail Merge Field မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏ mail merge inserter များကိုထည့်ပါ။ ပထမအမည်၊ အာကာသ၊ jw.org my ကျွန်ုပ်တွင်ဤတွင်တစ်နှစ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းရန်ငွေပမာဏရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ mail merge နယ်ပယ်အားလုံးကိုထည့်ပြီးသည်နှင့်စာပို့ခြင်းဘောင်ပေါ်တွင် Finish နှင့် Merge ခလုတ်နှင့် Email Messages ဤနေရာရှိ command သို့ကျွန်ုပ်သွားပါသည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာများပါ ၀ င်သောစာအုပ်စာအုပ်မှလယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်ဤအကွက်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ပါကဤအကွက်ကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဒီမှာအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအီးမေးလ်ပုံစံ (HTML၊ စာသား) ။ သို့မဟုတ်ပူးတွဲဖိုင်တစ်ခု) ။
မှတ်တမ်းများအားလုံးကိုပေးပို့လိုပါသည်။ ယခုတွင်ဤတွင်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါသည် - ကျွန်ုပ် OK ကိုနှိပ်လျှင်၊ ဤအီးမေးလ်များကိုအလိုအလျောက်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုသည်။ OK ကိုနှိပ်ပြီးမှပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Outlook မှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမပြုမီကြိုတင်အကြောင်းကြားစာကိုကျွန်ုပ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျများကို၎င်းတို့မပို့မီကြိုတင်ကြည့်ရှုလိုပါကဤနေရာတွင်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းရလဒ်များကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်စာထဲတွင်ပါရှိသည့်ထည့်သွင်းခြင်းများနှင့်မည်သို့မည်ပုံမြင်တွေ့နိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည် (ဤနေရာတွင်အပြီးသတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းခြင်းအောက်တွင်)၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့သို့သွားကာအရာအားလုံးကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်သည်မှာစာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီ၌ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးပါသော Microsoft Word ဖိုင်ကိုဖွင့်ထားသည်။ Outlook ။ ထို့ကြောင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းမှာ Finish နှင့် Merge ကိုနှိပ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၊ သင်၏ဘာသာရပ်လိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက် OK ကိုနှိပ်ပါ။ Outlook ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်။ အီးမေးလ်တွေကိုငါ့ Outlook ကနေမြန်မြန်ပို့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
ဒါပါပဲ! နောက်ဆုံး OK ကိုမနှိပ်ခင်သင်၏စာကို Word ဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ Microsoft Outlook သည်သင် OK ကိုနှိပ်သည်နှင့်ဤအီးမေးလ်များကိုအလိုအလျောက်ပို့လိမ့်မည်။ ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ youtube channel သို့စာရင်းသွင်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းတက်ရန် sign.missouri .edu သို့သွားပါ။
သင်၏ Microsoft အကောင့်နှစ်ခုကိုသင်ပေါင်းချင်သည်ကိုငါနားလည်သည် သင့်အားငါပြောလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင့်များပေါင်းစည်းခြင်း၏ထူးခြားချက်မရှိသောကြောင့်သင်တို့၏အကောင့်များကိုပြသနာကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်ဟုသာအကြံပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ Add link account ကိုနှိပ်ပြီးလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ။
0x87b20c08 xbox တစ်ခု
ကျွန်ုပ်၏ Skype အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်၏ Microsoft အကောင့်နှင့်မည်သို့ပေါင်းစည်းနိုင်မည်နည်း။
သင့်တွင် MSN Messenger, Hotmail သို့မဟုတ် Outlook ကဲ့သို့သော Microsoft account တစ်ခုရှိပါက Skype သည်သင်၏အကောင့်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ သင်၏ Skype အကောင့်ကိုဖွင့ ်၍ Microsoft အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ Microsoft အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်။ ဝင်ရောက်ပါ။ သင်၏အဓိက Skype အကောင့်ကို နှိပ်၍ ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ Microsoft အကောင့်သို့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်တစ်ခုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။
၁။ ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီး Accounts ရွေးပါ။ ၂။ အီးမေးလ်နှင့်အကောင့်များရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ ၃။ Microsoft အကောင့်ထည့်ရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။4အကောင့်၏ login အထောက်အထားများကိုရိုက်ထည့်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ Microsoft အကောင့်သို့အခြားအီးမေးလ်ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်သနည်း။
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ Outlook အကောင့်သို့အခြားအီးမေးလ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ အဆင့် ၁: Outlook.com သို့ သွား၍ သင်၏ Microsoft အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါ။ အဆင့် ၂။ Settings ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး View all Outlook settings option ကိုရွေးချယ်ပါ။ လှမ်း 3: Connected အကောင့်အစိတ်အပိုင်းအောက်မှာ options နှစ်ခုရှိပါတယ်။